ConnectLeader TopRung: B2B Ahịa Gamification na Ọrụ Nchịkwa Ọrụ | Martech Zone
ConnectLeader TopRung: B2B Ahịa Gamification na Ọrụ Nchịkwa Ọrụ
Thursday, July 13, 2017 Thursday, July 13, 2017 Douglas Karr
B2B ahịa osooso teknụzụ ọhụụ Njikọ Kọntaktị ekwuputala odiadi nke ya TopRung ịre ahịa ahịa na ngwa njikwa arụmọrụ. TopRung na-eji ike nke asọmpi otu iji kwado, ịnakwere ma mee ngwangwa ngwa ahịa, yana ịchụpụ usoro ịre ahịa yana mepụta mkparịta ụka ọgbọ ọhụụ na-aghọ ohere ikuku. TopRung na-eji ike nke asọmpi otu, egwuregwu na ihe ọchị iji:
Mmezi, ịmụta na mee ngwangwa ahịa na-eme
Mbanye ahịa usoro doro
Mepụta mkparịta ụka ọgbọ na-eduga ndị ọzọ nke na-aghọ ohere ikuku na mmanụ.
A kpọrọ TopRung a finalist na BIG Awards maka Business na New Product nke Afọ Atiya.
Anyị na-eji TopRung iji dozie akụkụ dị oke mkpa nke usoro ahịa anyị na - echekwa ndị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ ma na - akwalite na-agbanwe agbanwe yana obere asọmpi enyi na enyi. Katie Lawrence, CareerMinds VP nke Ahịa
Egwuregwu nke ConnectLeader na-eme ka mmadụ bụrụ ihe egwuregwu na ihe ọchị n'ime usoro ọrụ nke sistemụ ahịa siri ike taa.
Egwuregwu na-eme ka ndị egwuregwu na-arụ ọrụ mgbe niile ka ha na-asọ mpi iji nweta ihe mgbaru ọsọ site na mkpali, echiche okike na njikọta otu. Njikọ TopRung nke ConnectLeader na-ewe ọ takesụ niile nke ihe ịma aka egwuregwu wee jikọta ya na sistemụ ọgbara ọhụrụ iji bulie ahụmịhe nke ire na imechi azụmahịa. Senraj Soundar, Onye isi oche nke ConnectLeader
TopRung na-ebuputakwa ihe niile dị na ahịa Salesforce na ConnectLeader, iji mezie ngwa ọrụ maka mkpa azụmaahịa ọ bụla. Atụmatụ ndị ọzọ gụnyere:
Ntugharị - mekorita megide ndị ọgbọ iji chọpụta ndị mmeri ma na-esetịpụkwa ihe ịma aka n'etiti ndị ahịa ahịa iji chọpụta onye ga-agwụ elu.
ukpono - kwụghachi ụgwọ nkwadebe na ọrụ site na ime ka ndị otu, ndị ọrụ ibe ya na njikwa ya pụta ìhè.
Ịma Ọkwa - Broadcast leaderboard ọganihu jidesie TV Channel ma ọ bụ na ihuenyo ndokwasa n'elu ahịa n'ala – na customizable songs na-agbasa ozi ọma alerts na-eme ememe isi milestones.
Nnyocha data bara ụba - Na-enye ndị na-ere ahịa ohere ịnweta data arụmọrụ niile n'otu ebe. A na-ejide ihe omume, nsonaazụ na ọganihu iji nye ndị njikwa nyocha na-aga n'ihu na ikike iji dozie ma ọ bụ welie omume.
Njikọ Kọntaktị na-enye teknụzụ ngwangwa ahịa maka ụdị ọrụ ire ahịa niile iji bulie ego ha na-enweta site na nkwukọrịta kwalite, belata ọnụahịa yana akụrụngwa azụmaahịa kachasị arụ ọrụ nke ọma. Igwe okwu osisa nke ngwa agha nke ConnectLeader na enye ndi oru ahia na ahia ihe di ike iji choputa ma tinye onodu ahia di elu ma tinyekwa nghota njiko njiko ahia nke udiri azuma ahia na azumahia. A na-ewu teknụzụ ọhụụ na-emepụta igwe ojii na njikwa ọgụgụ isi nke ConnectLeader Adaptilytics which nke na-achọpụta ma na-ebute ndepụta ịkpọ oku na-apụ apụ na-ebute ụzọ kacha mma ị ga-esi kpọtụrụ.
Tags: workmindsmpiNjikọ ihegamificationKatie Lawrenceedu ọgbọpipelineọrụ ire ahịaasọmpi ahịaNkwado ire ahịaire ahịaihe mgbaru ọsọ ire erepipeline ahịandị otu egwuregwu na-ere asọmpiìgwè ndị ahịandị ahịasenraj daratoprung
Ndi Ndi ahia ga - eji dochie ndi mmadu?